Ururka IMB oo shaaciyey in uu hoos dhacii ugu weynaa ku yimi weeraradii Burcad badeeda aduunka – Radio Daljir
Luulyo 15, 2013 3:57 b 0
Kuala Lumpur, July 15- 2013 – War-bixin soo baxday maanta oo Isniin ah ayaa lagu sheegay in uu hoos u dhac kii ugu weynaa ku yimid weeraradii burcad badeedu ay ka geysan jireen xeebaha aduunka, marka loo eego 6-dii sano ee la soo dhaafay oo weeraro baaxad leh geysteen.
Xafiiska caalamiga ah ee Badaha iyo maraakiibta aduunka ee la yiraahdo IBM oo fadhigiisu yahay dalka Malaysa, ayaa war-bixinta soo baxday maanta 15 July ku sheegay in weeraradii Burcad badeeda ay aad u nusqaameen.
IMB waxay sheegeen in lixdii bilood ee sanadkan la diwaangashay 8 weerar oo ay qaadeen Burcad badeeda aduunka, iyadoo markaas ay ku guuleysteen afduubka labba doonyood balse laga soo furtay inta aysan geysan saldhig-yadii waa weynaa ee Burcad badeeda.
Hoos u dhaca weyn ee ku yimi weeraradii burcad badeeda aduunka waxaa lagu sheegay in qeyb weyn ka qaadatay howgalada ay wadaan Atlanta, iyo weliba doonyaha iyo maraakiibta aduunka oo haatan kaxaysta ilaalo hubaysan, xiliga ay marayaan gacanka Caddan iyo badweynta India.
War-bixinta xafiiska IMB ee la socodka maraakiibta iyo badaha ee dalka Malaysia ku yaala, waxaa lagu sheegay in haatan ay gacanta Burcad badeeda ku jiraan 57 Badmaax iyo Afar doonyood oo Afduub loo haysto.
Howgalka Atlanta ee la dagaalanka Burcad badeeda ayaa si weyn uga howgala xeebaha Barriga Afrika ee Soomaaliya ku dhow, waxaana sanadkan soo baxay warar kala duwan oo la xiriira weeraradii Burcad badeeda, hay?adaha ka faalooda arimaha Burcada waxay isku raaceen in uu aad isu dhimay falalkii Burcad badeeda.